Ukubhloga kunye nokupheka-Incwadi yoBumbano- NCEDA abantu abadala e-Ethiopia
Ukubhloga kunye nokupheka yi ubumbano yenziwa yi IHelpAge yamanye amazwe eSpain Foundation ngentsebenziswano neThermorecetas ye Qokelela ezinye zeebhloko ezifanelekileyo kwiSpanish gastronomy, eyona iphambili kwaye ithandwayo, kwiprojekthi enye injongo yayo kukwenza into yethu kwaye silwe indlala nentlupheko emhlabeni, Ukwenza eyona nto siyenzayo: ukupheka ngeebhloko zethu.
Incwadi yokupheka yomanyano equka iiresiphi ezingama-39 ezivela kwezinye zeebhlog zokupheka eSpain ukulwa indlala nentlupheko
Nge- $ 5 kuphela ungasebenzisana nesizathu esihle. Imali efunyenwe kwintengiso yencwadi yeresiphi yedijithali iya kuhamba ejolise ngokupheleleyo ekuncedeni iSiseko seHelpAge International eSpain Ukuxhasa ngemali iiprojekthi zabo e-Ethiopia ukuhlangabezana neemfuno zokutya zabantu abadala. Kuwe ayingomzamo omkhulu kodwa kubo ngumahluko phakathi kokukwazi okanye ukungaboyisi ubuhlwempu.
Cuina de la Dolorss ibhlog
Amashwamshwam amnandi kwaye anencasa
Pheka kunye neCarmela yam
Ukupheka kunye neCatman
Ukupheka phakathi kweminquma
Lolita umpheki we-pastry
Hayi iilekese nje
Ithagethi egqibeleleyo yekhekhe
IPaloma de la Rica
Iincasa kunye namaXesha